indreni Newsdesk | Indrenionline.com | Page 20
सल्यानमा हाइस दुर्घटना १८ जना घाइते, ५ को अवस्था गम्भीर
सल्यान, २४ पुस । सल्यानको वालुवा सङहीमा हाइस वस दुर्घटना हुँदा १८ जना घााइते भएका छन् घाइते मध्ये ५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आज विहान सुर्खेतबाट जाजरकोटको लागि छुटेको भे १ ख २५७३ नम्बरको काक्रेबीहार यातायातको हाइस छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्डको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका– ११ को बालुवा सङहीमा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेहरुमा चालक सुर्खेत ...
व्यावसायी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्नलाई जन्मकैद
सल्यान, २४ पुस । तुलसीपुरका व्यापारी राजकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको फैसला सुनाइएको छ । ब्यापारी श्रेष्ठलाई दाङबाट सल्यान पु¥याई हत्या गर्ने अभियुक्तलाई तीन वर्षपछि जिल्ला अदालत सल्यानले १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको फैसला सुनाएको हो । सल्यान अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेको इजलासले सुनुवाई गर्दै आठजनालाई कारागार चलान गरिएको छ । अदालतले बाँकी तीनजनालाई भने सफाई दिएको छ । ...
काठमाडौँ, २४ पुस । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व चर्किएपछि नेपाल सरकारले इराक र इरानमा रहेका नेपालीको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै स्वदेश फिर्ता ल्याउन पहल थालेको छ । इरानका जर्नेल कासिम सुलेमानी मारिएपछि अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्धमा झन् तिक्तता बढ्दै गएको छ । मङ्गलबार इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि अवस्था झन् तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । दुई देशबीच युद्ध भएका खण्डमा इरान ...
लाख दिएर करोड असुल्ने साहुकार यादव पक्राउ
काठमाडौं, २४ पुस । लाख ऋण दिएर करोडको तमसुक बनाउने र जग्गा बन्धकी मात्रै होइन, रजिस्ट्रेसन नै पास गरेर १५ सय व्यक्तिलाई ठग्ने खुंखार साहुकार रामबाबु राय यादव प्रहरी फन्दामा परेका छन् । सर्लाही बरहथवा–१० सीतापुरका रायको ठगीधन्दाबारे बुधबार नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । आफ्ना कर्तुत सार्वजनिक भएपछि भेष बदलेर भाग्दै गरेको अवस्थामा यादवलाई बुधबार दिउँसो साढे १२ बजे प्रहरीले ...
चिसोका कारण दुई दिन विद्यालय बन्द गरिने
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, २३ पुस । चिसो वढ्दै गएपछि घोराही उपमहानगरपालिकाले दुई दिन विद्यालय बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ । उपमहानगरपालिका शिक्षा इकाइ समितिले वर्षे विदाबाट कटौती गरिने गरी पुस २४ र २५ गते विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेको हो । शाखा अधिकृत नारायण पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा दुई दिन यस क्षेत्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ ...
दाङ, २३ पुस । माध्यमिक तहको पढाइको शुरुमै कक्षा ९ मा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई आफूले जीवनमा गर्ने काम बारे बिस्तृत योजना बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले दाङका ५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा दोस्रो चरणको वृत्ति–मार्गनिर्देशन कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । दाङका सरस्वती माध्यमिक विद्यालय भरतपुर, गंगा मा.वि., मा.वि. रझेना, महेन्द्र मा.वि. धर्ना र मा.वि. हापुर रतनपुरमा सञ्चालन गरिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ...
एजेन्सी । इरानको राजधानी तेहरानबाट किएभका लागि उडेको युक्रेनको बोइङ ७३७ विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । दुर्घटनामा परी विमानमा रहेका सबैको ज्यान गएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । फ्लाइट रडारमा युक्रेनको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको फ्लाइट पीएस ७५२ इमाम खोमेनी विमानस्थालबाट स्थानीय समयअनुसार ६ बजे बिहान उडान भरेको केही समयमा नै बेपत्ता भएको थियो। प्राविधिक समस्याका कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त बनेको इरानको मिडियाले ...
काठमाडौं, २३ पुस । अमेरिकाको आक्रमणमा परी सैन्य कमाण्डर कसिम सुलेमानी मृत्यु भएपछि इरानले इराकस्थित अमेरिकी सेनाको दुईवटा बेसमा आक्रमण गरेको छ । इरानले अमेरिकी सेनको वेस क्याम्पमा दर्जनौं क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको अमेरिकी रक्षा विभागले आक्रमणको पुष्टी गरेको छ । इरानका स्टेट टेलिभिजनले शिर्ष कमाण्डर कसिम सुलेमानीको ड्रोन आक्रमणमा हत्याको प्रतिशोध स्वरुप अमेरिकी सेनाको बेसमा आक्रमण गरिएको जनाएको छ । ...
दाङमा २ करोड लगानीमा आधुनिक ब्लक उद्योग
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, २३ पुस । दाङका तीन युवा व्यवसायीले जिल्लामै पहिलो आधुनिक ब्लक इट्टा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ वनगाउँमा करीव रू. २ करोडको लगानीमा युवा व्यवसायी पिताम्वर शर्मा, कृष्णप्रसाद गौतम र प्रभात भण्डारीले ‘राप्ती इको ब्लक उद्योग’ सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । करीव एक विगाह जग्गा लिजमा लिएर उनीहरुले यो उद्योग स्थापना गरेका हुन् ...
वसिंगटन, २३ पुस । इरान र अमेरिकाबीच तनाव बढिरहेको वेला इरानको संसद्ले अमेरिकी सेना र रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । इरानी संसद्ले विदेशी भूमिमा कार्य गर्ने कूड्स फोर्सका लागि अतिरिक्त रकम विनियोजन समेत गर्ने निर्णय गरेको छ । इरानको दक्षिणपूर्वी नगर केर्मानमा भेला भएका मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दै इरानको रिभोल्युसनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) का प्रमुख ...
Page 20 of 787« First...10«1819202122 » 304050...Last »